I-4C, i-4A, i-4B & nohlobo lwe-3 Curls nama-Patterns Wezinwele Zomnyama Ezimnyama?
UKUHLELA / UKUHLELA KWEMHLABA
Amathuluzi wokunwetshwa ne-Carrier
Iyacubungula & Ukuthumela
Umehluko ngohlobo lwe-4 no-3A, i-3B noma i-3C Textures?
Eziyinhloko ezimbili izinhlobo zezinwele ezinama-curly ngoba abesifazane abanemibala banokufana okuningi, umehluko, kanye nezici ezivamile. Ngokwesibonelo, labo abanohlobo lwe-3, kubonakala sengathi liyi-wavy uma limanzi. Kodwa ngokushesha nje lapho iqala ukuyomisa ngokushesha ibuyele esimweni sayo se-curly.
Labo abanezici ze-4a 4b zemvelo kanye ne-4c izinwele zinezinye zezimoto eziyingqayizivele kunazo zonke futhi ezihle kakhulu! Kodwa-ke, lokhu kuthungwa nakho kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi eyinkimbinkimbi yokunakekela ngenxa yamaphethini akhe aqinile.
Thayipha izinwele zemvelo ze-4 zizohlala zincipha uma zimanzi futhi zinezindwangu ezinamandla noma amakhoyili uma eyomile. Ngithanda zonke izinhlobonhlobo zezinwele zemvelo, futhi ngiyajabula kakhulu ukuthi abesifazane abaningi baqala ukwamukela izandiso zabo zezinwele zemvelo.
Ngizokwabelana nawe ngezinye zezinto eziphawulekayo phakathi kwezinhlobonhlobo zezinwele kanye namanye amathiphu amakhulu okunakekela izinwele zakho.
Amagundane noma amakhoyili angama-curls aqinile kakhulu lapho ububanzi be-curl bungamamitha ambalwa kuphela ububanzi. Umgomo wami walokhu okuthunyelwe ukukusiza ukuthi ufunde konke ongakwenza ukuze uthole indlela engcono kakhulu yokukhula nokugcina izinwele ezindala, ezinzima, nezinwele ezinempilo kungakhathaliseki ukuthi uyigugu.
1 Yini Uhlobo Lwezinwele ze-3?
5 YINI I-TYPE I-4 HAIR?
9 Indlela Yokunakekela?
9.1 Izandiso Zezinwele Zabantu
9.1.1 Eminye Imikhiqizo:
9.5 Indlela ye-LOC
Yini Uhlobo Lwezinwele ze-3?
Labo abanezinwele ze-3 bavame ukuba nomzimba omningi, bounce futhi bakhanyise izinwele zabo. Iphunga livame ukukhanya kakhulu. I-Luster ibhekisela endleleni ukukhanya kuveza ngayo i-shaft hair. Izinwele ngokuvamile zilula isitayela, ukuphatha, nokuqondisa. Kudingeka imikhiqizo yamakhanda amancane chaza lezi zindlovu. Ngizoqeda umehluko phakathi kwe-3A, 3B & 3C.
Labo abanakho Izinwele ze-3a yenza iphethini elihle kunazo zonke lekhalenda elingenzeka. Noma yini elula ngaphezu kwe-3A izowela ezigabeni ezimbili. Labo abanezinwele zezinwele 2a-2c bayoba namagagasi hhayi ama-curls. Izinhlobo zezinwele zemvelo ze-3 zivame ukukhanya okukhulu kulo, okusho ukuthi kunesibhakabhaka esiphakeme.
U-3a izinwele ze-curly ngokuvamile akwenzi kahle ama-crl ekremu, ama-oli, shiya kuma-conditioners noma imikhiqizo eqinile ye-curl ngokuvamile njengoba lokhu kuzokwehlisa izinwele futhi kwenze kube sengathi yi-wavy esikhundleni se-curly. Lokhu kuthungwa kwezinwele kuhamba kahle ngamaphakheji angama-lightweight-in in conditioners.
Lezi zindwangu zinekhalenda eligcwele elincane lomgqomo. Njengoba izinwele zithola ama-curls amade ukuze ziwele ngaphansi kwesimo se- "S" ngenxa yesisindo sezinwele, okwenza kubonakale sengathi i-wavy ngaphezulu kune-curly. Indlela enhle kakhulu yokugwema ukusebenzisa umkhiqizo ongalungile ezinwele zakho ukubuka izithako. Uma izingxenye zokuqala ze-1-3 zingamafutha amaminerali noma i-petroleum, cishe okungaphezu kwalokho, umkhiqizo uzoba ukuphakama noma oily ngezinwele zakho zemvelo.
Kusukela ekuhlangenwe nakho kwami ​​ukuba nginwele engokwemvelo, ngiyabona ukuthi leli phethini le-curl likhulu kulabo abaseSpanishi.
Ukuze uchaze lezi zindlovu ukugeza okulula bese uhamba ngekhefu lokufiphaza elikhanyayo emisebenzini engcono kakhulu. Bese uvumela izinwele ukuba zome.
isithombe sesikweletu IG: taty_froever
Labo abanakho Izinwele ze-3b zinezinto ezifanayo kuya ku-3a izinwele. Le ndlela yezinwele nayo ijwayele ukuphakama ekukhanyeni ngezidumbu eziningi futhi ivuselele izinwele. Iphethini le-curl yezinwele ze-3b ilula kancane futhi iyingcosana kune-3a. Umgoqo we-curl ufana nalokho okwakumakaki omkhulu we-Crayola.
Izinwele ze-3b yilapho ungase uqale ukubona i-frizz ne-puffiness ngaphakathi kweshadi leswele. Labo abanezici zemvelo ze-3b bangadingeka basebenzise izimo zokungena ngaphakathi kanye nezinye izikhwama zokulinda ezingenalutho ukugcina i-frizz isuke. Kodwa-ke, kusekhona okuqondile futhi kungenakuqhathaniswa ukuchaza izinwele ze-3b zemvelo.
Geza futhi uhambe kunobuningi futhi isitayela esijwayelekile kulabo abanokuthungwa kwe-3b. Uma lokhu kungukuthi izinwele zakho zingaphansi kokuphatha izinwele, okuchazwe kabanzi ukuthi izikhwama zizoba ziphi. Imikhiqizo emikhulu oyisebenzisayo ngalezi zinwele ifana ne-3A. Imikhiqizo ene-glycerine kuyo isebenza kahle njengamafutha asekelwe emanzini futhi izonikeza incazelo ephakeme ngaphandle kokukala izinwele.
Nakuba noma yibuphi ubuhlanga bungaba nezinwele ze-3b ezivuthiwe, ezivame ukubonwa kubantu abathintekayo noma bezinhlanga. Abantu abamnyama noma ama-Afrika aseMelika abaxubene nobuzwe obuthile obuvame ukuba nezinwele ezihamba phambili ngokuvamile bayoba ne-curl ekhululekile. Kodwa-ke, akudingeki ube yi-biracial ukuze ube nephethini le-3B ikhethini. Geza bese uyahamba kakhulu kakhulu futhi kuyathandwa kulabo abanezinwele ze-3B.
isithombe sesikweletu se-OG: @naturalhairobsessed_
Izinwele ze-3c inesici esiyingqayizivele ukuthi i-3a ne-3b abanayo. Izinwele ze-3b ziqala ukukhula esikhundleni sokuhla. Okusho ukuthi lizoqala ukukhula ngqo ekuqondeni kwe-shaft yezinwele, bese izinwele ziba isikhathi eside futhi zibe nesisindo kuso, zizoqala ukuwa ukudala isimo esizungezile esibizwa ngokuthi i-curly fro.
I-Corbin Bleu isibonelo esihle kakhulu salokhu kuthungwa. I-3c izodinga ukuxuba phakathi kwe-curl cream ye-heaver neminye imikhiqizo esekelwe kwamanzi. Lona ukuthungwa komkhiqizo othando. Iningi lamakhasimende ami anezinwele ze-3c angasebenzisa cishe noma yimuphi umkhiqizo.
Kuyindlela ejabulisayo phakathi kwezinwele ze-coos eziqinile neziqinile. Lezi zinwele zingathola imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele, nezinwele zokunakekelwa kwezinwele ezidingekayo ukuze kusize ukucacisa ama-curls bese ugcina i-frizz okungenani.
Labo abanezinwele ze-3c bazoqala ukugeza kancane bese behamba futhi bafaka ukufaka ngaphezulu kokusebenza kwabo. Indlela ejwayelekile kakhulu yokuchaza i-curl ye-3c i-outs ephuthelwe njengokugeza nokuhamba kudinga isikhathi esengeziwe nomkhiqizo.
Ithuluzi elihle lokuhlukanisa izinwele ze-3c yi-brush yakwa-Denman. Kunamanye ama-curls amaningi ahlukanisa amabhulashi emakethe ukuze ukhethe kusukela manje.
Abesifazane abaningi abanezinwele ze-3c bacatshangwa ukuthi banamakhono omabili womhlaba uma kuziwa kubuningi nobukhulu. Ubuningi bomzimba bukhomba ukuthi unamaphi izinwele zobuchopho obuningi nokujula okubhekisela ekutheni izinwele zezinwele zizinzima kangakanani futhi zidala ikhanda eligcwele lezinwele zemvelo ezisekhaleni!
isithombe sesikweletu ig @simplyshumba
YINI I-TYPE I-4 HAIR?
Sawubona, uhlobo lwami lwe-4 i-divas yemvelo! Uma usuwenze kulokhu okuthunyelwe, cishe ufuna konke kuzintambo zohlobo lwe-4. Yebo, sikufake. Lo Mhlahlandlela Wokugcina Uhlobo lwe-4 Hair luhlanganisa yonke into ekunqumeni ukuthi unezinhlobo zohlobo lwe-4 ukunakekela izinwele zakho zezitayela zokuzivikela. Ake sifinyelele ngaphakathi.
Thayipha izinwele ze-4 inabukeni or kinky, kodwa eqinisweni, lena yizinwele zezinwele eziphelile. Ama-curls aqinile kakhulu kangangokuthi ochwepheshe bezinwele babhekisela kuyo njengamalahle. Izinwele zemvelo zikaCily zikhula futhi ziphume. Kuzodinga umkhiqizo omningi nokuxhaphaza ukuze uwuthole. Thayipha izinwele ze-4 ezinokwemvelo zilula futhi zifiphaza. It has a luster low nge bounce kancane ngaphandle izinwele kuchazwa isitayela. Thayipha izinwele ze-4 zemvelo zingabamba zifakwe futhi zithanda umswakama. Funda kabanzi mayelana i-afro zezinwele nezitayela.
Izinwele ze-4A ingenye yamaphetheni amathathu wohlobo lwe-4. Lolu hlobo lwezinwele ludala i-tights-curl ebukeka njenge-coil evunguza noma encane. Le ncazelo ikhombisa lapho ihlanjululwa ngokwanele. Abesifazane bami abawela kulo mkhakha bangase babe nephethini elingaphezulu kweyodwa. Kodwa i-4a izoba iningi.
Izinwele ze-4a zinama-curls amancane noma amakhoyili. Ubukhulu be-curl kungenzeka kube yipensela uma i-hydrated ngokugcwele. Le iphethini le-curl yenza kahle ngokuphuma kwekhanda, ukuphuma kwe-braid, ama-knots ama-Bantu, nezinye izitayela eziningi.
Nakuba ukugeza nokuhamba kungenzeka ngalokhu kuthungwa, abesifazane abaningi banqume ukungenzi leso sitayela ngenxa ye-shrinkage. Ngenxa yemvelo yezinwele ze-4a ine-shrinkage eqondile futhi ayibonisi ubude bayo obuqondile kahle ngaphandle kokulula, isitayela. Izinwele ze-4a zenza kahle ngemikhiqizo esekelwe i-glycerin. Kuye ngokuthi i-porosity yezinwele zezinwele, ungadinga ukhilimu owodwa ophuzile ukuze ugcine umswakama.
isithombe sikweletu @tropicurlie ig
Uma unenkinga enzima ukucacisa ukuthi izinwele zakho ziyi-curl ene-S noma u-z-curl oqinile cishe 4B, owaziwa nangokuthi ungaphakathi. Lolu hlobo lwezinwele lunokuxuba kwe-tights-curls ngempela noma i-curls ezixekethile.
Izinwele ze-4b zivame ukuguquguquka kunezinwele ze-4C futhi zingakwazi ukuqhubeka kancane kancane futhi zihlale zide isikhathi eside kunezinwele ze-4C. I-divas yami enezinwele ze-4b inezinwele ezinzima ngokubonakala kwekotini uma kungachazwa. Kuthatha umzamo omncane wokwenza ama-curls aphume.
Lezinwele ziqukethe ama-coil kanye nezindandatho Iningi labesifazane be-4b nobubunjwa nezitayela izinwele zabo noma kunjalo. Ukuma kwe-4b kuvamile kakhulu futhi kulula ukuphula futhi kudinga umswakama njalo.
Izitayela zokuhlukumeza eziphansi zindlela enhle yokukhula nokugcina ubude. UMHLANGANO WAKHO Coily, kanye ne-Afro Kinky Collection, inikeza izandiso nama-clip-ins ezihlanganisa ngokumangalisa ngephethini le-curl.
Isikweletu sezithombe @2Izintambo
Izinwele ze-4C ligcwele kakhulu futhi lifana ne-4b, kodwa lezi zinwele zithayipha ngokuvamile zinencazelo encane futhi zithola inani eliphakeme kakhulu lokunciphisa. Izindandatho zinzima kakhulu i-curl komunye nomunye. Abanye abantu bathi izinwele ze-4c zinephethini ye-az, kodwa lokho akulungile. Izinwele azikwenzi amaphuzu abukhali kanye ne-kink emuva esikhundleni salokho nje zijika nge-itself. Kodwa kusekhona i-curl! Isibonelo, othile onothambo lwe-4c angaba nezinwele ezingu-12 izinwele uma eselulwa, kodwa kungase kubonakale sengathi yi-3-4 amasentimitha ubude ekuhambeni kwawo kanye nombuso.
Iningi lama-naturals we-4c awakuthandi ukugqoka nokugeza. Indlela ethandwa kakhulu kwisitayela se-4c sinokuphuma kwekhanda kanye nokuphuma kwekhono njengoba kubonisa ubude obuncane futhi ugcine izinwele zilula futhi ziphathwa. Izindandatho ezinamandla zivela ezihle kakhulu futhi zithobekile zome futhi zinyene. Izinwele ze-4C ngokuvamile zinezinga eliphezulu le-porosity, okwenza kube lula ukuthola umswakama kodwa kulula nje ukulahlekelwa yilezi zinyama. Imikhiqizo esekelwe ngamafutha isebenza kahle ukufaka uphawu lokuthi umswakama futhi futhi ukhululekile ekusetshenzisweni kwesitayela. Hlola ibhulogi yethu ngendlela ye-LOC! NGENA 4C izinwele zezinwele Faka baqinisekile ukugcizelela njengoba benza ukuthi babonakale ngendlela efanayo nokuthungwa kwakho.
Izandiso Zezinwele Zabantu
Ungakwazi futhi sebenzisa - izinwele ze-afro crochet ngakho ungafaka izinwele zakho zemvelo njengesitayela sokuzivikela noma uzibeke ebhodini eliphakeme noma i-ponytail Yethu izinwele ze-kinky curly kuyindlela enhle yokwengeza ivolumu nobude bakho izinwele ze-afro noma Thenga izandiso zezinwele ze-kinky.
kinky izinwele zezinwele eziqondile
Nazi ezinye izincomo zendlela yokuphatha izinwele zakho zohlobo lwe-4 ukuze uzigcine unomswakama, unempilo futhi ukhula.
Kufanele usebenzise i-moisturizer yansuku zonke ukuvuselela ama-curls akho. Kuzokwenza kube lula ukuphatha nge-styling esheshayo ekuseni. Sebenzisa enye yemikhiqizo ye-style styling ngenhla ukuze udale isitayela sakho esifisa.
Le mikhiqizo inhle kakhulu ekusizeni ukugcina i-4C enomswakama ngaphandle kokukwakha. Le mikhiqizo iphinde ihlose ukuhlala izinwele ze-4C eziphathekayo futhi ezilula.
I-Sunny Isle Jamaican Black Castor Oil Omnyama obengeziwe
CURLS I-Blueberry Bliss Control Ukunamathisela
I-Cantu Shea Butter Leave In Cream Repairing Cream
Kuye ngokuthi usebenza kanjani, ungathola ukuthi izinwele zakho zohlobo lwe-4 zidinga ukugeza wonke amaviki angu-1-2.
Sebenzisa i-detangler ngezinwele ezimanzi ngaphambi kokugeza izinwele zakho ukuze uhlanganise amahlumela akho ngaphandle, ngaphandle kokusheshisa. Ungamangala ngalokho okungahle kwenzeke ukuthungatha izinwele zakho.
Sebenzisa ukugeza okuhambayo emva kokuhlanza i-detangler yakho. Gxila kwi-scalp ukususa ukwakha.
Sebenzisa i-shampoo yokuhlanza. Enye yezintandokazi zethu yi-Shea Motureture Jamaican Castor Oil Shampoo. Le shampoo ihlanze ngaphandle kokuqeda izinwele.
Qedela nge-conditioner ejulile yokushiya. Vumela lokhu kuhlale ezinweleni zakho ngemizuzu ye-15 ngaphansi kwekhanda noma kwisithamela semiphumela engcono kakhulu.
Yini eyenza "Uhlobo lwe-4 LOC Method" luhlukile kunendlela evamile ye-LOC? Inqubo iyafana. Kodwa-ke, imikhiqizo esetshenziselwa izinwele zohlobo lwe-4 kufanele ibe yimikhiqizo esekelwe ngamafutha.
Ukungena kwakho kufanele kube ngokuyinhloko ngokusekelwe ngamafutha nalokho okusekelwe emanzini, amafutha akho kufanele abe ngamafutha we-castor noma amafutha kakhukhunathi, kanye ne-cream styling esebenzisa enye yeziphakamiso ngenhla.
Isilikhi noma i-satin, madadewethu! Gcina lezo zindwangu ezinhle zimbozwe ebusuku ngesikhala noma ibhontshisi. Uma unesikhathi, ungase ufune ukuguqula izinwele zakho ngaphambi kokulala ukuwelula ama-curls akho ngosuku olulandelayo.
Izitayela Zesisindo Sokwemvelo - Lesi sinkulunkulukazi esiyintandokazi esibukeka ngayo. Okufanelekayo ezindabeni ezithokozisayo, ngezikhathi ezikhethekile noma izinwele ezingenasisindo-zenzelwe isonto lomsebenzi. Futhi, qiniseka ukuthi usebenzisa i-yethu izinwele ezingcono kakhulu ze-crochet ukwengeza ubude obengeziwe.
I-Crochet Braids - Le masinyane iba yisitayela sokuzivikela esidume kakhulu sokwandisa izinwele zakho ngaphandle kweglue noma ama-wigs. Nge ama-crochet braids, ungasebenzisa izinwele njenge izinwele ze-yaki zokuqoqa izinwele for styling. Ama-Crochet braids alula kakhulu, futhi ungabuka isifundo esihle kulokho lapha.
Ukuthunga izinwele zakho empeleni kuyingozi !?
Indlela Yokuba Ngokwemvelo Evilaphayo
Iqiniso Mayelana Nezinwele Zase-Afro Ezibukhali
Ukukhulisa Izinwele Zakho Zemvelo
Indlela Yokwenziwa Ngabaculi Bamagama Nama-Waveformers
I-Kinky Straight Wig
Kulinganiselwe ngo- 4.76 aphume 5
Kulinganiselwe ngo- 4.67 aphume 5
Kulinganiselwe ngo- 4.73 aphume 5
Isikhwama se-Kinky Straight
Kulinganiselwe ngo- 4.74 aphume 5
Kulinganiselwe ngo- 4.63 aphume 5
Izimvume ze-Perm Yaki
Kulinganiselwe ngo- 4.70 aphume 5
Isibopho Esiqinile Esiqinile
Kulinganiselwe ngo- 4.60 aphume 5
Kulinganiselwe ngo- 4.88 aphume 5
I-Kinky Straight Clip-Ins
Kulinganiselwe ngo- 4.86 aphume 5
Kulinganiselwe ngo- 4.83 aphume 5
I-2019: Yenziwa Ngothando
Joyina i-VIP Club namuhla.
Thola izibuyekezo zekhuphoni! Sizokukwazisa ngokuthengisa, ukunikeza izindlela, imincintiswano nemikhiqizo emisha yemikhiqizo.
I-Pssssttt ... Joyina INKUBUBE YEKHUBA YOKUPHUMA?
Thola i-20% off 💖use Ikhuphoni Code "20off" 💖 Ukuthengisa Kuphela @Midnight
Thumela imeyili Ikheli